पृथ्वीनारायण ठिक हुन्, पृथ्वीनारायण बेठिक हुन् !
मुख्य पृष्ठकन्टिर-दृष्टिपृथ्वीनारायण ठिक हुन्, पृथ्वीनारायण बेठिक हुन् !
आज कतिपयले राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउँदै छन्, पृथ्वीनारायण शाहलाई नेपाल देशको एकीकरणकर्ताका रूपमा सम्झँदै छन् । कतिपयले उनलाई एकल जातीय र एकल भाषीय राज्यको संस्थापकका रूपमा पनि मूल्याङ्कन गर्छन् । सबैको आ–आफ्नै मत, विश्लेषण र टिप्पणी छ ।
कन्टिर–बाबू विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षपाती हुन् । उनको मत छ, विचारका आधारमा कसैलाई पनि निषेध गरिनु हुँदैन । नेपालको बहुलवादी समाजको संरचनालाई त सबैले स्वीकार्नुप¥यो नि !
पृथ्वीनारायण शाहका सम्बन्धमा कन्टिर–बाबूको आफ्नै धारणा छ– देश जोड्ने भनौँ वा गोर्खा राज्यको सिमाना विस्तार गर्ने भनौँ, जे भने पनि त्यो बेलामा उनीबाट थुप्रै गल्ती भए होलान् । तर यस सम्बन्धमा हिजोआज कुनै दृष्टिकोण विकास गर्नुअघि तत्कालीन विश्व समाज र राजनीतिको विश्लेषण आवश्यक छ । अरे यार … कुनै काम भइसकेपछि खोट देख्ने र जस लिनेहरू त दुनियाँमा जहाँ पनि भइहाल्छन् नि !
कन्टिर–बाबू स्पष्ट छन्– उनले नेपालको जग हालेकै हुन् । उनकै इच्छा र मार्गको सम्मान गर्दै भाइ–भारदारहरूले राज्य विस्तार गरेकै हुन् । त्यस काममा उनको र उनीहरूको काम गर्ने शैलीबारे बहस गर्न सकिएला । उनले विजेताको शैली अपनाए, कतिपय ठाउँमा बदला लिए, नाक कान काटे, झुठो बोले, स्वार्थपूर्तिका लागि सम्बन्ध बनाए, समावेसी शासन चलाउन सकेनन् ।
कुनै काम भइसकेपछि खोट देख्ने र जस लिनेहरू त दुनियाँमा जहाँ पनि भइहाल्छन् नि !
नाक–कान काटैकै कुरामा पनि उनले दिव्य–उपदेश भन्दै तत्कालीन फिरङ्गीहरूलाई देश निकाला गरेको, हेपेर बोलेको आफ्नो ढङ्गले बदला लिन फिरङ्गीमध्येका एक फिरङ्गीले किताब लेखेर नाक–कान कटुवाका रूपमा चित्रित गर्दै शाहको बदनाम गरेका हुन्, यस कुराको सरकारले विशेष अध्ययन टोली गठन गरेर छानबिन गर्नुपर्छ भनी तर्क गर्ने जानकारहरू पनि थुप्रै छन् । यसमा जति पनि बहस गर्न सकिन्छ र बहस हुनुपर्छ भन्ने कन्टिर–बाबूको मान्यता छ ।
दुःख त कन्टिर–बाबूलाई पनि छ नि ! शाहले उपत्यका र त्यसबेलाको शासनबाट कन्टिर–बाबूहरूको भाषा र सत्ताको प्रभावलाई ‘बायकट’ गरेर आफ्नै भाषा, संस्कृति र आफन्त लादे । तर यसै आधारमा मात्र उनलाई ‘अपराधी’ देख्न सकिन्न । उनका योगदान पनि त थुप्रै छन् ।
जाइ कटक गर्ने, नियाँ–निसाफ बिगार्ने, घुस लिनेदिने, व्यक्तिगत सम्पत्तिजस्तो राज्य बाँडफाँड गर्न चाहनेलाई देखी सहँदैनथे उनी । यस्तो पृष्ठभूमिमा पहिले अहिले भइरहेका शासकको व्यवहार र शासन–शैली हेरौँ अनि पृथ्वीनारायण शाहको व्यवहारको आलोचना गरौँ भन्ने कन्टिर–बाबूको सल्लाह छ ।
जसले गरेको होस्– राम्रो काम छ भने राम्रो र गलत काम छ भने गलत भन्नुपर्छ, तथ्यको अन्तिम किनारामा उभिएरमात्रै तर्क–वितर्क गर्नुपर्छ भन्ने कन्टिर–बाबूलाई लाग्छ ।
एकता जस-अपजस पृथ्वीनारायण
षड्यन्त्र र बहानाको सँघारमा चैते नवरात्र
गधालाई बाबु मान्ने प्रवृत्तिको वृत्तमा राजनीति
‘आकाश फाड’ स्टाइलमा मिनी जेनरल इलेक्सन